Imiyalo eyi-10 yePinterest Yezebhizinisi | Martech Zone
Imiyalo eyi-10 yePinterest yeBhizinisi
NgoLwesine, Juni 14, 2012 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 4, 2017 Douglas Karr
I-Pinterest iyaqhubeka nokuba ngumthombo ohamba phambili wethrafikhi kaMartech… ikakhulukazi ngeyethu I-Marketing Infographics ibhodi. Angichithi isikhathi esiningi kuPinterest njengoba kwenza abanye, kepha ngiyaqonda ngokuphelele ukuthi kungani kuyipulatifomu enhle kangaka. Kokubili kuyakhanga futhi kulula ukubhekabheka. Ungapheqa ngethoni lolwazi ku-Flick eyodwa yomunwe!
Okulindelwe lapho ibhizinisi lijoyina insizakalo efana nePinterest kwehluke kakhulu kunokujoyina komthengi, noma kunjalo. Uma ufuna ukuthi ibhizinisi lakho likwazi ukusebenzisa i-Pinterest ukushayela ithrafikhi, udinga ukukopisha ibhodi elihle futhi ugcine ingxoxo iqhubeka. Iklayenti lethu, Uhlu luka-Angie, Ubukhona obumangalisayo kuPinterest… uthumela okuqukethwe kukho konke kusuka Izimoto zakudala kuya AmaWindows Neminyango.
Ukuhlelwa Kwezenhlalo noMookoo Design kudonse ndawonye le infographic, The Imiyalo eyi-10 yokusebenzisa i-Pinterest yeBhizinisi, ekuqondisa ngemikhuba emihle namathiphu wokubeka iPinterest ukuthi isebenze kucebo lakho lokumaketha ezokuxhum. I-infographic ibisuselwa ku okuthunyelwe okuvela kubhulogi lika-Amy Porterfield.
Tags: Pinterestpinterest yebhizinisi
Ukubika Komphakathi Ngaphakathi kweGoogle Analytics
Ngabe Imidiya Yezokuxhumana Iyabulala Umkhiqizo Wakho?
UJun 15, 2012 ngo-6: 49 AM
Ngisebenzise i-pinterest kuwebhusayithi yami futhi umphumela waba muhle, yeqa ukusuka ekhasini 7 kuya ku- # 5 esikhathini esingaphansi kwamasonto amabili.
Ukhiye wukuthi kumele iwebhusayithi yethu iphinwe futhi iphindwe ngabantu abaningi, okuyingxenye enzima kunazo zonke. Iningi labasebenzisi be-pinterest ngeke baphinde baphendule lapho bengafani nalokho esikuphine.
Izizathu zokuthi kungani i-pinterest ilungele i-SEO:
1. Udinga ukubamba izixhumanisi zezikhonkwane zakho ukuze uthole ukwanda kwewebhusayithi yakho ku-SEO.
2. Uma iwebhusayithi yethu iphiniwe inokubalwa kwe-backlinks.
3. Noma iPinterest ingawusekeli umbhalo wehange (ngaphandle kwesixhumanisi se-url), isakulungele ukubeka amagama ethu abalulekile encazelweni.